चितवन मेडिकल कलेज तोडफोड : दोषीमाथि कारवाही गर्न चिकित्सक सङ्घको माग – " सुलभ खबर "
चितवन मेडिकल कलेज तोडफोड : दोषीमाथि कारवाही गर्न चिकित्सक सङ्घको माग
चितवन । नेपाल चिकित्सक सङ्घ चितवन शाखाले चितवन मेडिकल कलेजमा भएको तोडफोड र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि आरोप लगाउनेलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ। सङ्घले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दोषीलाई कानूनी कारवाहीको माग गरेको हो।
सङ्घका अध्यक्ष डा. प्रकाश खतिवडाले हस्ताक्षर गरी बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा आइतबार चितवन मेडिकल कलेजमा भएको तोडफोड र चिकित्सक माथि लगाइएको आरोपका कारण काम गर्न नसक्ने जनाइएको छ।
सङ्घले स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन २०६८ तथा नियमावली २०६९ अनुसार दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्नेसहित विभिन्न छ बुँदे माग राख्दै प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा चितवन मेडिकल कलेजका चिकित्सक, विद्यार्थी माथि भएको साङ्घातिक आक्रमणमा संलग्नलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरिनुपर्ने, अस्पतालमा भएको क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा व्यक्ति वा समूहबाट भराइनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने लगायतका रहेका छन्।
सङ्घले राखेका माग २४ घण्टाभित्र पूरा नभए जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवा बन्द गर्ने सङ्घले चेतावनी दिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नेपाल चिकित्सक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य डा कृष्ण पौडेल र डा. अनिलविक्रम कार्कीले गुण्डागर्दी शैलीमा भएको यस घटनाका दोसीलाई कारवाही गर्न माग गरे।
अराजक भीडका कारण स्वस्थ्य क्षेत्रको बद्नाम भएको भन्दै यस्तो कार्य नरोकिए देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवा बन्द गर्न सङ्घ बाध्य हुने उनीहरुको भनाइ थियो।
चितवन मेडिकल कलेजका निर्देशक डा दयाराम लम्सालले चिकित्सकले प्रयत्न गर्दागर्दै पनि मध्यबिन्दु नगरपालिका ९ कि ३२ वर्षीया आशा ज्ञवालीको निधन भएको जानकारी दिए।
बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै अस्पतालमा तोडफोड गरिएको थियो। सो क्रममा प्रहरीले १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले शान्ति सुरक्षाको मत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य संस्था बनेको बताए।
स्वास्थ्य संस्थामा अराजकतावाद मौलाउँदै गएको बताउँदै उनले यस्ता घटनालाई प्रशासनले सुष्म रुपमा हेर्दै आएको भन्दै निर्धक्कताका साथ काम गर्न आग्रह गरे।
काठमाण्डाै – चीनको राज्य परिषद्का सदस्य एवं रक्षामन्त्री वेइ फेङहेको आइतबार हुन लागेको एकदिवसीय कार्यगत